Rudzi: Concerts, Exhibitions, Performances
Ndinoda nhetembo-zvirahwe pamusoro pemapuraneti ezvezuva. Ini ndakazviita, asi nhasi handisi kuzviwana sekuipa! Zuva: Iyi nyeredzi yero inogara ichitidziisa, ichivhenekera mapuraneti ese, inotidzivirira kubva kune dzimwe nyeredzi. ...
Zvinodhura zvakadii kutora chikamu muchirongwa che "Izwi revana" ???
Zvinodhura zvakadii kutora chikamu muchirongwa che "Izwi revana" ??? Ndinoziva sei kuti iro remibvunzo rasvika? Izvo zvakakodzera kuti ini ndakaudzwa kuti 300, kana iwe uchida zvimwe, ipapo 000 Kuti uwane ...
chii chinonzi waifu? * Dmirtiy, iwe wakatsanangura zvakanyatsojeka. Anodikanwa wechikadzi anime hunhu, waanofungidzira nezvake kuti akaroora nm. Valeria, iwe wakatsanangura Michael zvakanyatsojeka, iwe wakaratidza zvizere zvinoreva izvi ...
Batsira! Ndeapi mazwi ekutanga concert na ,,,, iwe unoda mazwi emuratidziri !!!! Batsira !!!! Zvinoenderana nekonsati ipi uye nevateereri vapi ... Kazhinji, iwe unogona kuita chimwe chinhu senge: Masikati akanaka, shamwari dzinodiwa! Welcome to…. (zita remakwikwi) ...
ZVINOKOSHA !!! vanoda nhetembo pamusoro pamambokadzi! Mambokadzi weDutu, Mambokadzi weSinou, Mambokadzi Wousiku, Mambokadzi weMhepo. Haatombotarisike sechinhu chero chipi zvacho. Maziso echando, mambokadzi wechando !! ! Mwoyo wake chando, maoko ake ...
chikamu chechishanu chevapambi vecaribbean chinobuda riinhi uye vangani varipo muhuwandu? Kubva pamubvunzo, 5 watovepo) Vatambi vari kutamba mumutambo wechina, sekureva kwaDisney, havazoonekwa mune ramangwana ...
Yakawanda sei matikiti eCOMEDY VAKADZI, CLUB ??? Ndatenda Kupfura Komedi Mukadzi Mukadzi Kupfura Mazuva Evanhukadzi Mukadzi Zuva Motors (13:00 na 15:00) Manheru Motors (19:00 na 00:00) Nyamavhuvhu: 4 Gunyana: 11 ...
Makore mangani ari muDhokotera Ndiani? Iwo akateedzana akateerana akamhanya kubva 1963 kusvika 1989. Muna 1996, iyo TV firimu Chiremba Ndiani akaburitswa, iyo yaifanirwa kuve mutyairi episode yeakateedzana akateedzana, asi ...
Ndidzo Nhengo DZINOKOSHA DZIMWE Russian? nemazita evasikana vasikana mazita ndiani? ... Russian rave boka. Musikana mudiki anonzi Olympia Ivleva, uye murume anobva murwiyo Dick Bick anonzi Ilya Prusikin.
Iko kuMoscow kune yakavhurika mhepo cinema? mota cinema Muguta guru reRussia, mumugwagwa weSkladochnaya, kusiri kure nechiteshi chechitima cheSavelovsky, yakavhurwa cinema yemotokari yeusiku inonzi Kinoparking. Iyo institution ndeye, ...
Chii chinonzi zita rechikwata? Vanofamba vakarara Tinofamba usiku, tinofamba masikati, hatimboneta. Firefly Nyangwe chiedza chedu chisina kusimba uye isu tiri vadiki, isu tine hushamwari uye saka takasimba. Turtles Iyo yakanyarara iwe enda, iwe ucha ...
Mibvunzo ye66 mu database yakagadzirwa mu 1,082 masekondi.